Blockchain Izindaba 17.05.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 17.05.2018
NYC exchange Genesise uthola BitLicense
Genesise Global Trading unikiwe BitLicense woMnyango New York isimo sika of Financial Services (DFS), okwenza kube kuphela ngokuqinile yesihlanu iminyaka emithathu ukuthola ilayisensi impikiswano.
Ukushintsha elikhuthaza okusezingeni eliphezulu kuwufanele net kanye zimali yesikhungo nokunikezwa 24/7 ukuhweba Bitcoin, Litecoin nabanye.
Umbani inethiwekhi ikhula eziqine kakhudlwana
Inethiwekhi Lightning lukhula. Isibalo ISIZINDA belilokhu ziyanda past izinyanga ezintathu, njengoba lokhu igrafu ikhombisa lobo eqhathanisa Februwari 2018 May 2018.
Le modeli ubonisa inani ISIZINDA okuyinto bangalithola okubhekiswe noma ungayisebenzisi nokuzabalazela LN kule, ekhombisa % we inethiwekhi ukuthi kwakusazoba nomsebenzi tekusebenta, okubonisa ekuhlukanisweni yokwanda kokungabi LN.
I kukhona ukuvumelana ngokuthi okuqakathekileko inethiwekhi Lightning selikhule nethuthukisiwe kusuka February kuya Meyi.
Sberbank uqeda lokuqala isibopho kuthengiselana Russia usebenzisa blockchain
yasebhange Russian Sberbank futhi telecoms MTS ngokuqinile baye baqhuba lokho abakushoyo commercial isibopho kuthengiselana wezwe wokuqala wenza usebenzisa blockchain.
MTS imemezele ngoLwesibili ukuthi babehambise izibopho kwezentengiselwano 750 ruble ayizigidi ezingu ($12.11 abayizigidi ezingu), nomthengi eyinhloko ukuba Sberbank, usebenzisa nokuphathelene blockchain platform olunikezwa National Settlement Depository.
Andrey Kamensky, VP ezezimali, ukutshala izimali kanye M&A e-MTS, ubeke amazwana ukuthi uphumelele kuthengiselana blockchain kwenziwa ngokusebenzisa “lonke isiphetho uchungechunge, ukuvikeleka ukubekwa and cash irisidi ukuze ukugcwaliseka kwazo zonke izibopho ukuze zimali.”
Austria ihlele alawule Bitcoin bunjengegolide nemikhiqizo
ezezimali Austria mi ...
Mercedes ulungisela Crypto Coin ukuba Vuza Eco-Ukushayela
Daimler, German ...
Blockchain Izindaba 23.06.2018
Ukusetshenziswa usomabhizinisi ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 16.05.2018
Thumela Landelayo:Umuntu ukubikezela ukuziphatha ngesilinganiso cryptocurrency ngokuya ngenani ama-oda afakwe kanjani?
May 22, 2018 ngesikhathi 1:50 AM
May 24, 2018 ngesikhathi 9:43 PM
Juni 17, 2018 ngesikhathi 6:16 PM